छुट्यो विनयजंग र पुजाको प्रेम, विवाह पनि नहुने ! शर्मीलाले खोलिन् विनय र सपनाबारे सोच्नै नसक्ने कुरा (भिडियोसहित) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/छुट्यो विनयजंग र पुजाको प्रेम, विवाह पनि नहुने ! शर्मीलाले खोलिन् विनय र सपनाबारे सोच्नै नसक्ने कुरा (भिडियोसहित)
अरुले जस्तै यो विषयलाई नजिकैबाट नियाल्दै आएकी आफुलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनाउने शर्मिला वाईवाले पनि आफ्नो भनाईहरुलाई थुप्रै मिडियामा मार्फत प्रस्तुत गरेकी छन् ।
शर्मीलाले कतै सपनाको पक्षमा बोलेकी छन् कतै सपनालाई पनि दोषी ठह्रयाएकी छन् । उनले विनयजंगलाई त कुकुर नै भनेर सम्बोधन गरेकी छन् । उनको भनाई अनुसार यतिबेला बेवारिसे तथा पुनरउत्थान केन्द्रका अध्यक्ष भएर काम गर्दै आई रहेका विनयजंग बस्नेतलाई सामाजिक काम गर्नबाट बञ्चित गर्नु पर्ने बताएकी छन् ।
यस अर्थमा शर्मिलाकै भनाईलाई जस्ताको त्यस्तै बुझ्ने प्रयास यदि गर्ने हो भने सपनाका बुवाआमाले विनयजंगमाथि लगाएको आरोप केवल कुरा नमिल्दाकोलागी बनाईएको जालसाँजी मुद्या मात्रै हो ।